Wednesday January 09, 2019 - 22:00:07 in Wararka by
Wargeys lagu magacaabo (Baptist Standard) ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya dad Christian ah oo si dhuumaleysi ah kaaniisado uga sameystay magaalada Muqdishu.
Wargeyska oo soo xiganaya dad kala duwan ayaa sheegay in guri yar oo ku yaalla gudaha caasimadda ay si dhuumaleysi ah ugu kulmaan islamarkaana ay ku qabsadeen heeso iyo qoob ka ciyaar ay ku sheegayan iney ku cibaadeysanayaan.
Warbixintu waxay sheegtay in boqolaal Kirishtaan ah oo u badan Ajaanib ka kala yimid wadamada dariska la ah Soomaalida sida Kenya iyo Itoobiya ay guda dalka Soomaaliya ay ku wajahayaan cabsi aad u daran oo ay ka qabaan weeraro kaga yimaada Xarakada Al-shabaab iyo dad ay ku sheegeen damiir laawayaal ay ula jeedaan shacabka soomaaliyeed ee diin jaceylka lagu yaqaan.
Warbixinta oo soo xiganeysa qiyaas uu sameeyay waxa loogu yeero Bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in 99.8% dadka Somaliya eey yihiin Muslimiin, waana isku day been abuur ah oo ay ku doonayaan in ay awood ugu yeelaan kuwa tirada yar ee diinka islaamka ka riddoobay.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa 100% ah muslim marka laga reebo kuwa aan badneyn oo sanadadii lasoo dhaafay gaaloobayay badanaana kuwaas waxay ku noolyihiin dalka dibaddiisa halkaas oo markii hore lagusoo anshax xumeeyay.
" si qarsoodi ah Ayaan ugu kulanaa mid kamid ah guryaheenna oo kuyaal magaalada Muqdisho " sidaas waxaa yiri Nin Kirishtaan ah oo sheegay in uu madax uyahay kuwa gaaloobay ee gobolka Banaadir ku dhuumaaleysanaya wuxuu intaas raaciyay " Dadkani si fiican kuula tacaamuli mayaan gaar ahaan markey ogaadan inaad tahay Kirishtaan daacad ah ".
Baadariga kaniisadda waa Qandaraas qaate Kenyaan ah oo ka howlgala dhismayaasha magaalada Muqdishu wuxuuna caasimadda ku suganyahay muddo 5 sanadood ah.
Kooxdiisa waxaa ku jira dhowr qof oo Soomaali ah oo uu gaaleysiiyay islamarkasna si dhuumaaleysi ah ugu dhexnool bulshada Muqdisho oo gaala naceyb caan ku ah.
Baadariga oo sii hadlaya ayaa yiri; " Waa qatar halkaan in lagu ogaado in aad kirishtaan”, wuxuu sheegay in uu wadanka u joogay si uu diinta Kirishtaanka u faafiyo kadibna uu mushaar ku helo.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Xarakada Al-Shabaab ay khatar ku tahay amniga kirishtaanka ku nool geeska Africa, wargeyska oo u muuqday in uu dhaleeycaynayo camalka jihaadiga ah ee Al-Shabaab ku difaacayso muslimiinta " waxay heystaan caqiidada wahaabiyadda mayalka adag waana xagjirayaal" ayaa lagu daabacay wareyskan.
waxay warbixintu sheegaysaa in wada shaqeyn heer sare ah ay ka dhaxayso Shacabka Soomaaliyeed iyo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin taas oo caqabad weyn ku ah mashruuca gaaleysiinta ee lala damacsanyahay soomaalida.
Warbixintu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay horay u qaadday weeraro lagu beegsaday dad kirishtaan ah oo ka dhacay gudaha dalka Kenya, bishii October,2018, deegaan dhaca gobolka Muslimiinta Soomaalida NFD ayaa lagu dilay laba Macallimiin Kirishtaan Kenyaan ah oo wax ka dhigayay iskuul gobolkaan degmada Wajeer.
Bishii August 2017 kaniisad ayaa laga furay magaalada Hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya balse dibad baxyo ay dhigeen shacabka magaaladaas iyo cadaadis lasaaray maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa sababtay in kaniisaddaas albaabada laysugu dhufto.
Baadari lagu magaacabo Giorgio Bertain oo ku sugan dalka Jabuutii sidoo kalane gaaleysiinta uqaabilsan kaniisadaha Kiristaanka ayaa sheegay in ay adagtahay in kaniisad laga hirgaliyo wadanka "Way adagtahay in Soomaaliya laga hirgeliyo kaniisad marka loo eego caqabadaha ay wajahayaan dadka Kirishtaanka ah ee halkaas ku nool, waxaana lagu qasbay in ay si qarsoodi ah u kulmaan, waana wax adag in aad Soomaaliya joogto ado Kirishtaan ah" ayuu yiri Baadariga Kenyaatiga ah.
Xerada Xalane oo kutaal duleedka magaalada Muqdisho waxaa ka dhisan Kaniisado Konteenarro iyo Teendhooyin ka sameysan oo ay ucibaado tagaan saraakiisha ciidamada AMISOM iyo safiirrada safaaradaha reergalbeed ee qeybta ka ah duullaanka Soomaaliya laguso qaaday.
Waxaa xusid mudan in wasiirroo iyo shaqaale katirsan DF-ka oo dibadaha lagusoo anshax xumeeyay ay qaateen Kirishtaanka balse ay isqariyaan ayna bulshada fasaad ku hayaan.